Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » FLYING WALES: Diyaaradda xamuulka ee ugu weyn adduunka
FLYING WHALES waxay soo saartay xal cusub, la awoodi karo oo bay'ada u fiican si loogu raro culeysyo aad u culus meelaha cufan ama fog.
Shirkadda Franco-Quebec FLYING WHALES, oo naqshadeysa, soo saarta oo maamusha hawo-mareenka xamuulka ee ugu weyn adduunka (LCA60T), ayaa isku diyaarineysa inay horumariso waxqabadkeeda Quebec.
Dib -u -habaynta Qaab -dhismeedka Saamilayda
Si loo gaadho marxaladaha muhiimka ah ee looga baahan yahay helitaanka liisankeeda hawlgalka, FLYING WHALES waxay ku dhawaaqaysaa inay dib -u -habayn ku samaynayso qaab -dhismeedka saamileyda.
Bishii Sebtember 9, 2021, AVIC GENERAL, waxay iibisay saamiyadeeda u dhiganta saamiga 24.9% ee FLYING WHALES, iyada oo loo sii marayo AVIC GENERAL France, saamileyda Faransiiska ee hadda ku soo biirey kooxda bangiyada Faransiiska Oddo.
Sidaas darteed, saamileyda dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee Faransiiska ayaa leh 75% FLYING WHALES iyo Quebec waxay leeyihiin 25% iyada oo loo marayo Investissement Québec (IQ). Qeybta hoose ee Montreal “Les dirigeables FLYING WHALES Québec” waa 50.1% oo ay leedahay FLYING WHALES iyo 49.9% IQ.
Québec: Saldhigga Guriga ee Ameerika
Himilada laanta Montreal waa inay gasho qaybta duulimaadyada ee Quebec oo ay iskaashi la yeelato ciyaartoy la aasaasay oo lagu kalsoonaan karo si loo dhiso qaar ka mid ah faa'iidooyinka istaraatiijiyadeed ee LCA60T. Isdhexgalkani wuxuu gacan ka geysan doonaa kobcinta warshadaha hawada ee Quebec, gaar ahaan marka la eego tamarta la cusboonaysiin karo ee kooxdan dhaqaale ee muhiimka ah.
FLYING WHALES waxay diyaarin doontaa goob warshadeed oo ku taal Quebec oo loogu talagalay khadadka isku -xidhka ee maraakiibtooda buuxda ee duulimaadyada LCA60T ee Ameerika. Dhowr goobood ayaa daraasad lagu hayaa. Goobta la doortay waxay soo saari doontaa dhammaan LCA60T -yada loogu talagalay Ameerika. Tani waxay ka dhigan tahay tobanaan milyan oo maalgashi iyo, ugu dambayntii, abuuritaanka ilaa 200 shaqooyin toos ah, tayo leh oo mushahar fiican leh.